Kojic Acid waxaa loo yaqaanaa 5- hydroxyl -2- hydroxymethyl -1 iyo 4- piranone. Waa shey dabiici ah oo acidic daciif ah oo lagu sameeyay halsano ee sheyga.Fine tramperic acid waa cirbad cadaan ah ama midab huruud ah leh sida crystal; si fudud ugu milmi kara biyaha, aalkolada iyo acetone, xoogaa ku milma ether, ethyl acetate, chloroform iyo pyridine, oo aan lagu daadin karin benzene; Qaaciddadeedu qaabeysan tahay C6H6O4, Miisaanka molikalka142.1, Barta dhibic153 ～ 156 ℃. Halbeegyada Farsamooyinka Muhiimka ah Muuqaalka Caddaan ama madoow cad sida ...